सिन्धुली । तपाई सिसि क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ । कृपया नराम्रा काम गर्ने प्रयत्न नगर्नुहोला । यो भनाई अर्थात् शब्द सिन्धुलीमाढीमा जारी प्रादेशिक महोत्सव २०७५ मा दोहोरी रहन्छ ।
महोत्सव अवलोकन गर्न जानु भएका तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ की छैन । प्रस्तुती बाह्ेकका समयमा कार्यक्रमका उद्घोषकले बारम्बार यो कुरा दोहोर्यायी रहन्छन् ।
जब हामी महोत्सवका अवलोकनकर्ताले तपाई सिसि क्यामेराको निगरानीमा हुनुहहुन्छ भन्छन् तब ढुक्क भएको महशुस गर्छाैँ । आँफु सुरक्षित भएको आभाष गर्छाैँ । र तपाई त अझै पनि त्यस्तै सोचिरहनु भएको होला । नसोच्नु पनि कसरी ? तर अब भ्रममा नपर्नुस् ।
महोत्सवमा झगडा परेको, मोवाइल हराएको, झोला हराएको कुरा कत्तिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । एक दिनको कुरा हो । जब स्टेजमा गायिका ज्योती मगरले स्टेज तताई रहेकी थिइन् । दर्शक झुमीरहेका थिए । त्यो दिन सदाकै समयमा कार्यक्रम सकियो ।
हामी दिदी बहिनी गफिदै बाहिर निक्लिदै थियो । स्टेज सामुन्नेको गेट के पुग्न लागेका थियौँ । एक्कासी पछाडीबाट हामीलाई धकेलिदियो । दुबै जनाले पछाडि फर्केर पनि हेर्यौँ । भिडभाड ठुलो थियो । एकैछिन पछि दिदी आत्तिदै भन्छिन् ब्याग हरायो । अत्तालिदै दुबै जना खोज्नका लागि भित्र पस्न थाल्यो तर नसके पछि सुरक्षाकर्मीसँग गएर भन्यौँ । दाई हाम्रो ब्याग हरायो । उनले भने कहाँ, कत्तिबेला ? अहिले भर्खर यहि भिडमा मेरो उत्तरमा उनको होर भन्ने आवाजमात्र सुनियो । त्यसपछि फेरी अर्काे सुरक्षाकर्मी कहाँ गएर भन्यौँ । उनले सल्लाह दिए आयोजकसँग भन्नलाई ।
मानिसको त्यो भिडमा बाटो बनाउदै दुबै दिदी बहिनी ठुलो अपेक्षा लिएर आयोजकलाई भेट्न स्टेज निर गयौँ । उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अम्रेशचन्द्र बैदारलाई सबै कुरा भन्यौ । उनले पनि कुनै तत्परता देखाएनन् ।
सिसि क्यामेरा छ भन्नु भएको होइन ?
छ न त छ तर यहाँ त छैन ।
त्यसो भए कहाँ चाँही छ त ?
मुल गेटमा चाँही छ ।
केही छ त विकल्प ?
सिसि क्यामेरा भएको भएपनि यत्रो भिडमा कसरी पत्ता लगाउनु र ।
उनीसँगको कुराकानी पछि फोन लगायौँ । झरेको भए त फोन बजिहाल्छ नी मात्रै के भन्दै थिए । फोनको रिङ गयो । फोन उठ्यो तर कोही पनि बोलेनन् र फोन काटिदियो । अर्काे पटक पनि उठायो अनि काट्दियो । झण्डै ५ पटक यस्तै भयो । त्यसपछि मोबाइल स्वचिअफ भयो ।
अर्का एक जना व्यक्ति बोले आँफैले पो ध्यान दिनुपर्छ त । आजलाई जानुस् भोली निवेदन दिनुस् ।
कत्ति सजिलैसँग भनिदिए उनले तर झोला हराएका हामीमा के परिरहेको छ भन्ने कसैले बुझेनन् । कसलाई पो जानाजान आफ्नो सामान हराउन मन लाग्दो हो । उत्साहका साथ महोत्सव हेर्न आएका दुई दिदी बहिनी फर्किदा रिक्तो हात र मनमा पिडा लिएर फर्कनु पर्यो ।
मोबाइल, पैसाँलगायतका अत्ति महत्वपुर्ण कागजात गुमाएको पीडा बोकेर प्रहरी कहाँ निवेदन दिन पुगेको त यो समस्या एक जनाको मात्र होइन रहेछ । महोत्सव सुरु भएदेखि यस्ता गुनासो बोकेर थुप्रै पीडितहरु पुग्ने गरेको थाहा पाए ।
भन्नलाई सिसि क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भन्ने अनि हातमा बोकेको ब्याग कस्ले तान्यो र हराएका सामान कस्ले उठाए ? भन्दा ए यहाँ त छैन भन्ने यो कस्तो विडम्वना । त्यतीमात्र होइन महोत्सव हातामै हुने र भएका घट्नाका बारेमा पनि आयोजक नै अञ्जान बनेको देख्दा अचम्म लाग्यो । अनि सोचे यहाँ जे भन्दा पनि हुने रैछ । अनि जे गर्दा पनि हुने रैछ ।
रातमा आयोजना गरिने यस्ता मेला महोत्सवमा व्यवस्थापन पक्ष मज्बुत तथा कडा बनाउन पर्छ भन्ने तर्फ आयोजकको ध्यान किन नगएको ? की यो घट्ना आयोजकमध्येका कोहीले भोग्नुपर्ने ? आम सर्वसाधारणको समस्या, समस्या होइन ? यस्ता घट्ना घटाउने महोत्सव रातमा नै किन ?
निकै तामझामका साथ आयोजना गरिएको प्रादेशिक महोत्सवमा व्यवस्थापन पक्ष राम्रो छ भने दावी गरिरहदाँ पनि किन घट्ना घटिरहेका छन् । आयोजकको यसमा ध्यान जान सकेको छैन । सक्छौ त सुरक्षासहितको वातावरण देऊ, सक्दैनौँ आश नदेखाऊ ।